Jereo ny renivohitra tsara indrindra hitsidika an'i Eropa. Vaovao momba ny dia
Ny renivohitr'i Eropa izay tokony ho tsidihinao
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, General
En Eoropa dia manana renivohitra maherin'ny efapolo hitsidika azy isika, miaraka amin'ireo tanàna manan-tantara izay manan-javatra betsaka atolotra antsika. Ny fandehanana any amin'ny tanàn-dehibe dia mahaliana hatrany, satria izy no iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra ary noho izany dia hanana fialamboly sy toerana maro haleha.
Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo renivohitra tsara indrindra any Eropa ho an'ny fitsangatsanganana, miaraka amin'ireo tanàna izay tsy azontsika adino. Tsy isalasalana fa miatrika karazana safidy isika raha ny resaka fitsangatsanganana no hanomezana fahafaha-manao betsaka antsika, satria amin'ny renivohitra dia misy toerana malalaka fialamboly sy tsangambato.
1 Roma, Italia
3 Atena, Gresy
4 Berlin, Alemana
5 Vienne, Aotrisy
6 Paris, Frantsa
7 Copenhagen, denmark
8 Ljubljana, Slovenia
9 Lisbon Portugal
10 Prague, Repoblika Tseky
Iray amin'ireo ny ankamaroan'ny renivohitra fizahan-tany any Eropa rehetra dia tsy isalasalana fa Roma. Ity tanàna taloha ity izay ivon'ny Fanjakana iray manontolo ankehitriny dia manome antsika tsangambato toy ny Colosseum, ny faritry ny Forum Romanina na ireo toerana voatahiry tsara toa ny Pantheon of Agrippa. Tanàna misy toerana fihaonana maro izy, toa an'i Piazza Navona miaraka amin'ireo loharano mahafinaritra na ireo Steps Espaniola malaza miaraka amin'ireo tohatra malaza. Any Roma dia mila mahita ireo catacombs koa ianao ary mankeny Vatican hijery ny Basilica an'i St. Peter. Tsy azontsika atao ny tsy mahita ny faritra manodidina mahavariana toa an'i Trastevere.
Dublin no renivohitr'i Irlanda ary amin'ity tanàna ity dia hahita toerana mahaliana sy toerana malalaka hankafizana labiera tsara isika. Ny Guinness Storehouse dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra ary io dia momba ny labiera guinness, labiera malaza indrindra. Ao amin'ny ozinina isika dia afaka mankafy ny fomba fijery ao amin'ny Gravity Bar, izay hanompoan'izy ireo anay Guinness ihany koa. Ao an-tanàna dia tsy maintsy mamaky ny araben'i Grafton sy O'Connell isika, satria izy ireo no be mpahalala. Ary tsy tokony halahelo ny Katedraly St. Patrick ianao, ny sarivongan'i Molly Malone, na ny Trinity College.
Atena dia tanàna tsara tarehy iray hafa izay mitazona tantara marobe ao. Ny Acropolis manjaka ny zava-drehetra avy any amin'ny avo dia ny faritra manandanja indrindra saingy tsy tokony halahelo ny manodidina an'i Plaka ianao, ilay tranainy indrindra ao an-tanàna ary iray amin'ireo sary mahafinaritra indrindra. Avy amin'ny Lycabeto Hill dia hanana ny iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra izahay hatrany Acropolis. Ao amin'ny manodidina an'i Monastiraki dia afaka mahita ny tsena souk isika ary tokony hamakivaky ny manodidina an'i Psiri, izay manodidina ny lamaody.
Berlin dia iray amin'ireo tanàna izay manana rivo-piainana tsy mampino, maoderina ary velona. Amin'ity tanàna ity dia azontsika atao ny mankasitraka ny sisa tavela amin'ny rindrina taloha Berlin izay nampisaraka ny tanàna, mandehandeha mamaky ny vavahady Brandenburg na mijery ny tranombakoka Pergamon. Alexander Platz sy Postdamer Platz no kianja roa lehibe indrindra. Anisan'ny tranobe malaza indrindra ny Parlemanta Berlin na ny Katedraly Berlin.
I Vienna dia tanàna miavaka indrindra amin'ny hatsaran-tarehiny. Opera Vienna Opera na Schönbrunn Palace tsy mampino izy ireo dia roa amin'ireo trano manome porofon'izany. Ny katedraly Viene miorina ao Stephansplatz dia miavaka amin'ny tafon-tranony miloko. Ary koa, tsy maintsy mahita toerana hafa ianao toa ny Museum of Art History na ny fiangonan'i San Carlos Borromeo.
I Paris no tanàna tantaram-pitiavana indrindra eto an-tany ary mahafinaritra antsika izany Tilikambo Eiffel tamin'ny taonjato faha-XNUMX, miaraka amin'ny Katedraly Notre Dame, ireo mpitsangatsangana mitety an'i Seine na ny manodidina an'i Montmartre sy Le Marais. Betsaka ny zavatra azo jerena ao Paris, toy ny Louvre Museum, ny fiangonana Sainte Chapelle na ny Arc de Triomphe.
Ity renivohitra ity dia iray amin'ireo ambaratonga avo indrindra amin'ny fahasalamana eto an-tany, ohatra amin'ny tanàna eropeana hafa. Betsaka ireo toerana hitsidihana toa an'i Nyhavn na seranan-tsambo vaovao izay misy rivo-piainana mahafinaritra miaraka amin'ireo kafe sy trano fisakafoanana. Tsy afaka mijanona tsy mahita ny sary sokitra an'ny The Little Mermaid na ilay tanàna malalaka malalaka any Christiania izahay. Ho hitantsika ny lalana Stroget izay làlana mpandeha an-tongotra lava indrindra any Eropa ary mitsidika ny Rosenborg Castle.
Tanàna eropeana tsara tarehy iray hafa ity misy toerana toa ny Bridge of Dragons, misy fefy dragona efatra, ny Katedraly Saint Nicholas na ny Castle Ljubljana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao amin'ny Kianja Preseren, izay malaza indrindra eto an-tanàna, dia hahita fitsangatsanganana izahay ary koa ny Tetezana Triple sy ny fiangonana Franciscan an'ny fanambarana.
Lisbon dia toerana iray nofinofy hafa, tanàna manana toetra maro. Ao anatin'izany no ahitantsika ilay Torre de Belem manaitra, mankanesa any amin'ny Alfama manodidina azy amin'ny fitadiavana fomba bohemia kokoa na zahao ny tanànan'ny monasitera Jerónimos mahafinaritra. Toerana hafa tsy hadino ny Barrio de Chiado, ny Barrio Alto na ny Castillo de San Jorge.
Prague, Repoblika Tseky
Prague dia manolotra toerana tsara tarehy toa antsika Kianjan'ny tanàna taloha izay misy ny Clock Astronomical. Ny Bridge Charles malaza dia fitsidihana tena ilaina hafa ary tsy azontsika atao ny tsy mahita ny Prague Castle na ny Powder Tower.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny renivohitr'i Eropa izay tokony ho tsidihinao
Ny firenena be olona indrindra eto an-tany